Yize enqobile usenezinselelo uMaduro - Bayede News
Yize enqobile usenezinselelo uMaduro
UJesu akezanga ukuzochitha umthetho nabaphrofethi
Kunamazwe asephumele obala angakufihla ukuthi azimisele ngokutakula iVenezuela otakwini ebhekene nalo
UNGENE esikhundleni sendoda eyayingahlonizi ngokuba nenzondo ejulile ngamazwe angogombela kwesawo, iwasola nangokuncela okuncane okusasele emazweni angaboni ngasolinye nawo, namuhla uMengameli waseVenezuela uMnu uNicolas Maduro ubhekene nenselelo enkulu yokubuyisa uzinzo nethemba kubantu bezwe lakhe abamnike ithuba lokubahola kule minyaka eyisi-6 ezayo.
Ngempelasonto edlule uMaduro ubuyiselwe esikhundleni ihlandla lesibili okhethweni oluthathwa njengobelunzima ngoba ubenganikwe thuba nezimbangi zakhe zithola ukwesekwa okuqhamuka ezitheni ezinkulu zeVenezuela ezinjenge-USA. Ngesikhathi kudlula emhlabeni uMengameli waseVenezuela uMnu uHugo Chavez ngoNdasa wezi-2013 emuva kokuhlaselwa isifo somdlavuza, igama likaMaduro lalikude nakulabo ababengavala isikhala sikaChavez.
Wayengakufihli ukuthi i-USA iyisitha esikhulu seVenezuela futhi akasoze avumela ukuba oMengameli base-USA bamphendule isicelankobe. UMaduro kukhona ababembona njengesichuse, namazwe abeyinkukhu nempaka noChavez azitshela ukuthi igcagcele esokeni kanti akabuzanga elangeni.
Kungashiwo yini ukuthi uMaduro unqobe okhethweni obelukhululekile futhi lungenazihibe njengoba kukhona amaqembu aludubile ukhetho ebeka izaba zokuthi vele imiphumela izovuna iqembu elibusayo elisasebenza ngenqubo yeSocialism. UMaduro owayengumshayeli wamabhasi ngaphambi kokungena ngokugcwele kwezepolitiki uthi uyolandela inqubo kaChavez kuze kube sekugcineni.
Ezindaweni lapho ekhuluma khona uze azibize “ngendodana kaChavez”. Uthi naye umelene nenqubo yogombela kwesabo abasemkhankasweni wokuqeda ngamazwe angaphansi kwe-Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC), ukuze kuphele konke ukunotha kwawo ngowoyela. Noma kuthe kuqedwa ukumenyezelwa kwemiphumela yokhetho zaqala ukubonakala izinkomba zokuthi imikhonto imcijele uMaduro kulabo abangadlelani naye, kepha amazwe anjengeRussia neChina yiwo asakhombisa ukumeseka.
UMengameli uVladimir Putin waseRussia nozakwabo waseChina uXi Jinping yibo abebeseka iVenezuela ngezimali ngesikhathi isesikhathini esinzima emuva konswinyo lwamazwe ayizitha zayo.
Izinto azikabuyeli esimweni eVenezuela emuva kweminyaka emihlanu umnotho wakhona wehlelwe ngamandla. Ukunqoba kukaMaduro kusho lukhulu eqenjini lakhe kodwa kubantu baseVenezuela abakulindele ukuphela kobubha nendlala, ukubuya komkhiqizo kawoyela. “Uma ningangethemba ningivotele elinye ihlandla ngizoyinqoba impi yomnotho.” Lawa ngamazwi kaMaduro abekhankasa ngawo kubavoti, sekuye ngawo amagama enkehli amagalelo akhe sekumele abonakale.
Enye yezimbangi zikaMaduro uMnu uHenri Falcon owake waba isikhulu esiphezulu kuHulumeni ubenamathuba amfimfayo okuphumelela kulolu khetho ngoba ubebonakala enyunda kunokuzikhongela. Ngesikhathi ethi abantu baseVenezuela bafuna ukuba uMaduro ashabalale abanye le nkulumo yakhe bayihumusha njengokuthi ukhulumela amazwe aseNtshonalanga. Okunye okubonakale kumenze wakhala ngaphansi ukwehlukana phakathi kweqembu lakhe eliye okhethweni seligaqa ngamadolo.
Muva nje ubuhlobo phakathi kwe-USA noHulumeni kaMaduro buphinde bashuba ngesikhathi kuboshwa izikhulu eziphezulu zenkampani ephehla ugesi iCitgo yase-USA eVenezuela, eCaracas. Lezi zikhulu zagcinwa izinyanga ezintathu ekomkhulu lamasosha ezobunhloli ngamacala enkohlakalo.
UMengameli wase-USA uDonald Trump uthi noma bezwelana nesimo esikhona njengamanje eVenezuela kodwa ugxeka inqubo yokubusa yeSocialism ngokuthi iyona ecekela phansi izwe. Inqubo yeSocialism yileyo esebenza ngokuthi uHulumeni acaze umnotho wezwe kubantu bonke kunokuba umnotho uqhoqhobalwe idlanzana labathile. Amanye amazwe emhlabeni asasebenzisa le nqubo yokuphatha iChina, iDenmark, iFinland, iNetherlands, iCanada, iSweden, iNorway, i-Ireland, iNew Zealand neBelgium futhi wonke anobudlelwano obuhle neNingizimu Afrika. EChina nguHulumeni wakhona ophethe umnotho wakhona futhi nezinkampani eziningi ezingaphakathi ngezikaHulumeni.
IFinland yizwe elihamba phambili ngezinga lemfundo futhi kunohlelo lwemfundo yamahhala nabafundi baphakelwa uHulumeni okulenza izwe elinesibalo esincane kakhulu sabantu abangafundile emhlabeni. ESweden nakhona kunezinhlelo eziningi zikaHulumeni zokubhekelela inhlalakahle yabantu njengoba kwenzeka naseNorway. Impumelelo yala mazwe ekukhuliseni umnotho nokubhekelela inhlalakahle yezakhamuzi iveza ukuthi inqubo yeSocialism esetshenziswa uHulumeni waseVenezuela akuyona eyimbangela yokufadabala komnotho.
Okubonakala kwenzeka eVenuezela abaholi abagcwele inkohlakalo phakathi kwabo okukhona abasebenzisa le nqubo kaHulumeni ukuzicebisa bakhohlwe abantu. Ezinye zezinkampani ebezenza imikhiqizo ebalulekile ezweni nasemnothweni wezwe ziwele ezandleni zabantu abebengaqeqeshekile ngendlela. Ukushayeka kweVenezuela kubonakale ngokwehla kwamandla kawoyela usuka e-$120 umphongolo uya ema-$25 umphongolo ngowezi-2014.
Lesi yisikhathi sokuthi uMaduro asondele kakhulu emazweni asawezwa ekhaleni njengayo iRussia, iChina neCuba enoMengameli omusha uMiguel Díaz-Canel ongeke ayilahle iCuba agudluke ephusheni likaMengameli wokuqala uFidel Castro.
Uma uMaduro ekwazile ukunqoba ngamalengiso ukhetho lwangeledlule, kusho ukuthi abantu baseVenezuela basamethemba futhi usengakwazi ukusebenzisana nabo kulesi sikhathi abamnike sona ukulungisa isimo izwe elinomlando ongaka lingaphenduki inhlekisa.
nguNtobeko Shozi May 28, 2018